သာမန်အဖိုးကြီး | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
ကဗျာလေး ကြိုက်တာ မမချိုသင်းရေ..
ဒီနေ့ မှာ သတိတွေ ပိုရပါတယ်။ (KM)
ကျွန်တော့် ရှိစုမဲ့စု ကုသိုလ်တွေကိုလည်း အမျှဝေလိုက်ပါတယ် ဆရာ။
ချိုသင်းရေ ကျေးဇူးပါပဲ။ ကောင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာ။
အမရေ သတိရနေတာကို ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်။
ရိုးရိုးကုပ်ကုပ် ပုဆိုးစုတ်ကလေးနဲ့ ဆိုတဲ့စကားသားကို ဖတ်လိုက်ရတာ ဆရာကြီးပုံကို မျက်စိထဲမြင်ယောင်မိလာတယ်။ ဆရာကြီးကလည်း တသက်လုံး ရိုးရိုးကုပ်ကုပ် ပုဆိုးစုတ်ကလေးနဲ့ပဲနေသွားတာကိုး...
တို့လဲ အဲလို သာမန် အဖွားကြီး ဖြစ်ချင်တယ်...
ကဗျာလေး ကောင်းလိုက်တာ မမရေ။ အလွမ်းခရီး သုံးနှစ်...။ မမတို့ပြုသမျှ ကုသိုလ်တွေအတွက် ဘဘကောင်းရာဘုံဘဝကနေ ပြုံးလို့သာဓုခေါ်နေမှာပါ။
ရေချိုးဆိပ် post ကို တင်တော့ တွေးနေမိတယ်။
နှစ်သက်ကြည်မွေ့တဲ့ အရာတွေနဲ့ တန်ဖိုးထားပြီး နောက်ကလိုက်မိတဲ့ အရာတွေဟာ ဘာဖြစ်လို့များ ကွာနေတာပါလိမ့်လို့။
ခု ကဗျာကို ဖတ်ပြီး ထပ်တွေးမိပြန်တယ်။
တချို့ကျတော့ ရွေးစရာ မရှိလို့၊ တချို့ကျတော့လည်း ရွေးကိုရွေးချင်လို့...
ဆရာကြီးရဲ့ ကဗျာကို ဖတ်ခွင့်ရတာ ကျေးဇူး အမ၊ မိသားစုနဲ့ထပ်တူ ဆုတောင်း အမျှဝေပါတယ်။
အလွမ်းခရီး ၃ နှစ် ရှိခဲ့ပြီကိုး...
ချိုသင်းနဲ့ ထပ်တူ ခံစားမိပါတယ်...
ချိုသင်းပြုသမျှ ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ အဖေရောက်ရာ ဘဝကနေ ပြုံးပြီး သာဓုခေါ်နေမှာပါ...
ဆရာကြီးပြုံးနေတာ မြင်ယောင်နေတယ် ချိူသင်း ရေ.
ကမ္ဘာ့အာဏာရှင်တွေ အာဏာမဲ့ပြီးသေတော့ လွမ်းဆွတ်
တဲ့သူက ဘယ်လိုများမများ မသိ။ မြန်မာအာဏာရှင်ကြီးတွေ သေတော့ မိသားစုလောက်ပဲလွမ်းကြမယ်တူပါတယ်
ဆရာကြီးလို ရိုးရိုးအဖိုးကြီးဖြစ်ချင်တဲ့ သူတော့ ချစ်တဲ့ပြည်သူအားလုံးက တသသ မိသားစုနဲ့ ထပ်တူအမျှ.
ဆရာကြီးက မြင့်မြတ်တဲ့ ဘုံကနေ သာဓုခေါ်နေမှာပါ။
မမိုးချိုသင်းရေ .. အဲဒီကဗျာလေး ဖတ်ခဲ့ဖူး နှစ်သက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
မနေ့ညက ကလေးကဗျာလေးတွေအကြောင်း ရေးရင်း ဆရာကြီးကို သတိရနေမိသေးတယ်။ ကျမတို့ငယ်ငယ်က ဆရာကြီးရဲ့ ကဗျာလေးတွေနဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့ကြရတာ။
ဆရာကြီး ကွယ်လွန်တာ နှစ်တွေ ဘယ်လောက်ကြာကြာ ကဗျာတွေကတော့ အမြဲရှင်သန်နေမှာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်က ကျမဘလော့မှာ တင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ပို့စ်လေး အမကြုံရင် ဖတ်ရအောင် လင့်ခ်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း တချိန်ကျရင် သာမန်အဖိုးကြီးပဲ ဖြစ်ချင်တယ် ။
သာမန်အဖိုးကြီး မဟုတ်တဲ့ ကျနော့်တို့ရဲ့ ကဗျာအဖိုးကြီးကို သတိရလွမ်းဆွတ်လျက် ဖတ်သွားပါတယ်။
အမ စာတွေမဖတ်ရတာကြာနေတာ ဒါကြောင့်ကိုး...။
ဘဘဦးတင်မိုး အတွက် ညီမလေးလဲဆုတောင်းပေးမယ်နော် ..
သမီးပဲ ဖြစ်ချင်ပါတယ် အမ။
ဒီတစ်ခါ ဘာဟင်းတွေ ချက်လဲ အမ။
ဘဘ ကဗျာလေးအလွမ်းပြေတင်ပေးတာကျေးဇူးပါ။ ဖတ်တိုင်းလဲမရိုးနိုင်သလို..တစ်ခါဖတ်ရုံနဲ့ တန်းမြင်ယောင်လို့ရတဲ့အတွက် အခုထိ လေးလေးစားစား ဖတ်မိနေတုန်းပါ။
ကဗျာဆရာတွေ သေရင် ငရဲမလားဘူးမမ
ကဗျာဆရာကြီး အခုဆို ဦးမာဂအကြောင်း ကဗျာတွေ စပ်နေလောက်ပြီ...
နတ်သမီးနတ်သားတွေလည်း သီချင်းအတူဆိုရင်း ပွဲကျနေလောက်ပြီ...
နတ်ကျောင်းသားလေးတွေဆိုလည်း တပျော်ပျော် တပြုံးပြုံးနဲ့ ကဗျာတွေ လိုက်ရွတ်နေလောက်ပြီ...
အမရေ ကဗျာလေး ဖတ်ပြီး အပြင်မှာ မမြင်ဖူးတဲ့ အမတို့ သားအဖပုံကို မှန်းကြည့်မိတယ်... စိတ်မကောင်း မဖြစ်ပါနဲ့ အမ... တူတူနေခဲ့ရတုန်းက ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတာလေးတွေ ပြန် အမှတ်ရပြီး အလွမ်းဖြေနိုင်ပါစေ
ကျနော်လုပ်ခဲ့ဖူးသမျှ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်း မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်
ချစ်ခင်စွာတမ်းတသော သမီးရဲ့ ကုသိုလ်မျှဝေသံများ ဆရာကြီးကောင်းရာဘုံဘ၀မှ ကြားသိပါစေ...
ကဗျာလေးက အရမ်းကောင်းတာပဲ အမ ရယ်
သတင်းထဲမှာ ကြားလိုက်တယ်။ ၃နှစ်တောင် ပြည့်ပြီးကိုး။ ဘာမှမကြာလိုက်သလိုပဲ။
SU SU MAUNG said...
ausmfjzwf&ef 0Hrav;awmhjyD” wJhvm;/
Please convert to Myanmar fornt
awG;rd a&;rdwdkif; tvGrf;awGydkaeygw,f/
Please convert Myanmar fornt
To reach to the heaven
To passalot of grave
It’s doesn’t matter that you said.
Sir, as you wrote, you said
Some time the dead
It can call wrong person!
I don’t want to believe that
Sir was dead.
The condolence words
Can’t be out form my mouth
How can I get forget, friends
Whenever I though, I write I can’t help missing you Sir.
ရိုးရိုးကုပ်ကုပ် နေတတ်တဲ့ ဆရာ့ကို သတိရမိပါတယ်။
မနေ့ကပဲ အင်းစိန်အိမ်ကို ဆွမ်းကျွေးရောက်ခဲ့တယ်။
တနေ့ တနေ့ဘာpost တင်လဲ လာကြည့် ရတာ အမောပဲ
ဆရာကြီးလည်း ကောင်းရာမွန်ရာဘဝကနေ သာဓုခေါ်နေမှာပါ...
အဲဒီ သာမန်အဖိုးကြီးက..ကျမတို့ မျိုးဆက်ကို.. မနီကလေး တို့ က တဆင့်.. သွန်သင်ပြခဲ့တယ်လေ..
စာဖတ်ပြီး လွမ်းစရာဖြစ်သွားတယ် ညီမရေ
ကဗျာလေးဖတ်ရတာ မှတ်သားဖွယ်ပါပဲ။ ပူးတေ အသက်ကြီးလာရင်လဲ ကဗျာထဲက အဖိုးကြီးလို သာမန်အဖွားကြီးဘဝပဲဖြစ်ချင်တာ။ မာန်မာနတွေ၊ အာဂါတ(ဂကြီးရှာမတွေ့လို့)တွေနဲ့၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းသွား၊ စိပ်ပုတီးဆံထုံးမှာပတ်၊ ဆွဲကြိုးကြီးကို ချက်လောက်ထိရောက်အောင်ဆွဲ၊ လက်တွေ ၁၀ချောင်းလုံးမအားအောင် စိန်လက်စွပ်တွေစွပ်ထားပြီး၊ ထမင်းချိုင့်ကြီးက ၅ ဆင့်ချိုင့်ကြီးနဲ့ အသုတ်၊ အကြော်၊ ပုဇွန်ထုတ်ဆီပြန်၊ အရည်တမျိုးနဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီအချင်းချင်း အားကျအောင် သားကြီးကလေ အမေရိကားမှာ၊ အငယ်မက ဂျပန်မှာ၊ သားနဲ့ ချွေးမ၊ သမီးနဲ့ သမက်ရဲ့ အရေးကိစ္စအားလုံးကို သူဘယ်လို ဘယ်ပုံ စီစဉ်ပေးရတာ စသည်ဖြင့် တနေကုန် တယောက်ပြီးတယောက်ကို လိုက်ပြောပြီး (နားထောင်တဲ့ လူကတော့ပြောင်းသွားတယ်၊ သူကတော့ ဒိုင်ခံပဲ) ညနေနေစောင်းတော့ ဂျိုင့်ကြီးကို အိမ်ဖော်မလေးကို ကိုင်ခိုင်းပြီး အိမ်ကလာကြိုတဲ့ကားပေါ် မိန့်မိန့်ကြီး တက်ထိုင်ပြန်သွားတဲ့ အဖွားကြီးလိုလဲ မဖြစ်ချင်ဘူးမမရေ။
မမရေ ရေးရင်းနဲ့ ရှည်သွားတာ ခွင့်လွှတ်ပါနော်။
ညီမ ဒီတခါ 2009 July မှာ ရွာပြန်တုန်းက ဝါဆိုလပြည့်နေ့မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းရောက်တယ်။ ဥပုသ်သည်တွေကို ဝေယျာဝစ္စလုပ်ပေးလို့ရယ်၊ ဘုန်းဘုန်းဆီ သွားပြီး ဆေးလေးဘာလေး လိုအပ်တာလေး သွားလှူတာလေ မမရေ။ အဲလို အဖွားကြီးတွေ အတော်များများတွေ့ခဲ့တယ်။ ဓမ္မအကြောင်း ပြောဆိုဆွေးနွေးနေတဲ့ ယောဂီတော်တော်လေး နဲနေပြီ။ မရှိဘူးလို့မပြောပါဘူး။ အဲလို တကယ် ဓမ္မကို သေချာလိုက်စားတဲ့ ယောဂီတွေလဲရှိမှာပါ။ သူတို့ကလဲ အပေါ်ကလို အဖွားကြီးတွေများတဲ့ နေရာမျိုးတွေ မလာတော့တာ မလာချင်တော့တာထင်တယ်။ ပူးတေတောင်တရက်ထဲနဲ့ အတော်စိတ်ပျက်သွားတယ်။ :(
မမတို့ဖေဖေရေးတဲ့ ကဗျာလေးက တော်တော်လေးကို ထိမိလှပါတယ်။ မမတို့ဖေဖေ ဆရာကြီးဦးတင်မိုး ကောင်းရာဘုံဘဝကို ရောက်ရှိနိုင်ပါစေလို့ လေးလေးနက်နက် ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
သုံးနှစ်တဲ့လား ချိုသင်း ရေ ... ဆရာကြီး ဦးတင်မိုး ရဲ့ 
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုံး ကတော့ မျက်စိထဲ မြင်ယောင်နေဆဲပါ ... လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်က
ဆရာကြီး ဦးတင်မိုး ကို နယူးယော့ မှာ စတွေ့ တုန်းက
ဆရာကြီးရဲ့  ခြေအိတ်လေး ပေါက်နေတာ( အမှန်တော့ ဆရာကြီး က အ၀တ်အစား ဂရုမစိုက်လို့ပါ... တို့လည်းေ ခြအိတ်အပေါက် တခါတလေ ၀တ်တတ်တယ် ) တွေ့ မိလို့
တို့ အိမ်မှာ အပို ၀ယ်ထားတဲ့ ခြေအိတ်တွေ ရှိနေတာနဲ့
ဆရာကြီးကို ပေးခဲ့တာ ကို အခုအချိန်ထိ အမြဲတမ်း မှတ်မှတ်ရရ သတိယ နေဆဲပါ ...
အရမ်းကို နှစ်သက်မိလို့ ကဗျာလေး ကူးချင်ပါတယ်....။ အဖေ့ ကို စာရေးရင်..ထည့်ပေးလိုက်ချင်လို့ပါ...။
i want to be that kind of old man toooo.....
ကဗျာလေး ကို အရမ်းသဘောကျမိပါတယ်။
ကဗျာလေး လာဖတ်သွားပါတယ်။ ကောင်းမှုကုသိုလ်အတွက်လည်း သာဓုခေါ်သွားပါတယ်။
May buddha keeps U Tin Moe wishes come through to beasimpleaboe gyi.
အဖိုးကြီးနှစ်မျိုးထဲမပါလို့ မြန်မာပြည်က တတိယ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေလို့ နာမည်ပေးထားကြသလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း တတိယအဖိုးကြီးလို့ နာမည်များပေးရကောင်းမလား တွေးမိတယ်။ ပြောမှားဆိုမှားရှိလည်း စိတ်ဆိုးလိုက်ပါ။
ကဗျာကို အရမ်းသဘောကျတယ် အန်တီရေ...